Soo-saareyaasha Qalabka & Bixiyeyaasha Caaga - China Factory tubbada Caaga
Isku xiraha furan
Waxyaabaha isku xiraha furan iyo furaha furaha ayaa si gaar ah loo qaabeeyey polyamide. Heerka ilaalinta waa IP50. Is-bakhtiiye, oo aan lahayn halogen, fosfooras iyo cadmium (amarka RoHS ku qanco). Heerkulka heerkulkiisu waa min-30 ℃, max100 ℃, muddo-gaaban120 ℃. Midabku waa madow (RAL 9005). Waxay la jaan qaadi kartaa WYT tubbada furan. Qalabka isku xiraha furan waa polyamide si gaar ah loo qaabeeyey. Waxaan leenahay dun mitir iyo dunta PG.
Iskuxiraha Xarkaha Caaga ah
Waxyaabaha isku xira xusulka caagga ah waa polyamide Waxaan leenahay cawl (RAL 7037), madow (RAL 9005). Heerkulka heerkulkiisu waa min-40 ℃, max100 ℃, waqti-gaaban120 ℃. Olol-celinta waa V2 (UL94). Heerka ilaalinta waa IP66 / IP68. Olol-celin: Is-bakhtiiye, oo aan lahayn halogen, fosfooras iyo cadmium, ayaa maray RoHS. Waxay la jaan qaadi kartaa dhammaan tubbada marka laga reebo tubbada WYK. Waxaan leenahay dun mitir iyo dunta PG iyo xarigga G.
Maadadu waa naxaas lagu dhejiyay nikkel. Heerkulka heerkulkiisu waa min-40 ℃, max100 ℃. Isticmaalka shaabadaha ku habboon, Darajada ilaalinta ayaa gaari karta IP68. Waxaan leenahay dun mitir iyo dunta PG iyo xarigga G. Kordhinta fudud ee 45 ° / 90 ° xusullada iskuxiraha iyo foorarka si loo dhigo inta lagu jiro rakibidda.
Isku xira birta oo leh Snap Ring
Waa isku xira tuubbada birta ah. Maaddooyinka jidhku waa naxaas la marsaday; shaabaddu waa cinjir wax laga beddelay. Darajada ilaalinta waxay gaari kartaa IP68. Heerkulka heerkulkiisu waa min-40 ℃, max100 ℃, waxaan leenahay dun xariiq ah. Faa'iidadu waa saameyn wanaagsan iyo iska caabin gariirka, tubbada ayaa leh shaqeyn quful xoog leh.
Isku xiraha si isku mid ah ugu xirxiran Gargaarka Cillada
Maadadu waa polyamide. Isticmaalidda ku-habboonaanta O-isku-xirnaanta ee gudaha xarkaha isku-xidhka, IP66 / IP68, adoo adeegsanaya xanjo ku xidha dunta. Waxaan leenahay cawl (RAL 7037), midab madow (RAL 9005) Heerarka heerkulka waa min-40 ℃, max100 ℃, muddo-gaaban 120 ℃. Olol-celinta waa V2 (UL94). Is-bakhtiiye, oo aan lahayn halogen, fosfooras iyo cadmium, ayaa maray RoHS. Waxay la jaan qaadi kartaa dhammaan tubbada marka laga reebo nooca culus ee tubbada WYK. Waxaan leenahay dun mitir iyo dunta PG.
Isku xiraha leh Gargaarka Cadaadiska leh Mawjadda Birta
Maaddadu waa polyamide oo leh dunta naxaasta leh ee nikeel lagu xidho. Darajada ilaalinta waa IP68, adoo adeegsanaya xanjo xarkaha dunta. Waxaan leenahay cawl (RAL 7037), madow (RAL 9005) midab. Daahida ololka waa V2 (UL94). Heerkulka heerkulkiisu waa min-40 ℃, max100 ℃, muddo-gaaban 120 ℃. Is-bakhtiiye, oo aan lahayn halogen, fosfooras iyo cadmium, ayaa maray RoHS. Guryaha ayaa ah kuwo iska caabin ah oo saameyn aad u fiican leh, isku xirnaanta dunta oo aad u sarreeya, oo fiilooyinka isku dhejiya. Waxay la jaan qaadi kartaa dhammaan tubbada marka laga reebo nooca culus ee tubbada WYK. Waxaan leenahay dun mitir iyo dunta PG.